I-20 yeRustic Column Scheme 2018-Yila umbala wePhalethi yokuHombisa kwakho - Iikimu Zombala Ezivavanyiweyo Zoyilo
I-20 yeRustic Column Scheme 2018-Yila umbala wePhalethi yokuHombisa kwakho
Eyona ndlela ilula yokwenza amakhaya ethu azive elungele ixesha elizayo? Ukutshintshela iziqwenga ezenza i-palette yonyaka, on-trend. Kwi ukuwa , Oko kuthetha ukwamkela iithoni ezifudumeleyo eziseta i mnandi , umboniso wefestile kwaye ubonakalise ukutshintsha kwemibala indalo (hayi nje, bomvu, tyheli, kunye no-orenji, nangona bengabadlali bamandla ngeli xesha lonyaka). Ngaphambili, fumana imibala engama-20 yokuwa kunye nendlela yokuyifaka kwindawo yakho.
Jonga igalari Amashumi amabiniIifoto Ihlathi leFeliks 1Ngama-20Ukutsha kweorenji
I-orenji etshisiweyo kukulalanisa okuhle phakathi kobomvu kunye neorenji. Nangona isithunzi sisenamandla, sithe cwaka kancinci kwaye somisa umhlaba, senza umbala opheleleyo wombala owayo. Kweli gumbi lokulala lenziwe ngu I-Arent kunye nePyke , Uhlaziyo lwamaxesha onyaka olulula njengokuzisa iimeko ezintsha zomqamelo.
UTasmin Johnson MbiniNgama-20I-Coral ebala
Nangona iorenji ngokuqinisekileyo ingumbala wokuwa, iyadlamka kwaye iyaguquguquka ngokwaneleyo ukuba isebenze kwiinyanga ezifudumeleyo, kananjalo, awunyanzelekanga ukuba utshintshe ibhedi rhoqo. Ikorale emthubi iyayenza intwasahlobo nehlobo, nayo. Umyili UTasmin Johnson imibala ethe tyaba yesilayidi ukuzisa ubusika obuninzi kunye nee-moody hues, nazo, njenge-inky navy kunye nehobe elimnyama.
Iingcinga ze draperies zegumbi lokuhlala
Chango & Co 3Ngama-20Amalahle
Imozulu epholileyo ifuna ukubakho kwangaphakathi kwe cozier, ke faka iithoni ngobunzulu ngakumbi. Kule gumbi lokuhlambela lendlu yefama lenzelwe Chango & Co Umqolo omhlophe oqaqambileyo usekwe yimibala emnyama engwevu kunye nemifanekiso ehambelana nayo.
Ihlathi leFeliks 4Ngama-20UMarigold
Siyayifumana-imibala engqindilili aziva ngathi kukuzibophelela okukhulu awuqinisekanga ukuba ukulungele ukwenza. Akunyanzelekanga ukuba upeyinte lonke udonga lwemarigold. Yongeza nje umsebenzi wobugcisa! Kweli gumbi lokutyela lenzelwe yiArente kunye nePyke, iyakhanyisa indawo yonke.
USara uTramp 5Ngama-20iphitshi
Eyona ndlela ilula yokwenza ukuba indlu yakho ikulungele kukusombulula iiragi zeetoni ezifudumeleyo. Kwezi stairwell ziyilwe ngu UEmily Henderson , ii-swirls zepesika kunye nomdaka wetshokholethi zenza ukuba imigangatho yekonkrithi imeme ngakumbi. Amagqabi ayatshintsha, ukugquma kwakho kumgangatho kufuneka, nawo.
UCatherine Kwong 6Ngama-20Ipikoko
Ngelixa uluhlaza okwesibhakabhaka uziva ubushushu bendalo, ipikoko eluhlaza / eluhlaza / engwevu ityebile ngokuwa. Splice kwimibala ethile ekhanyayo yegrey kunye ne-crisp emhlophe ukuyikhanyisa, njenge UCatherine Kwong ndenze apha.
I-Arent kunye nePyke 7Ngama-20Berry
Musa ukoyika ezimfusa. Umbala omfusa / opinki / obomvu othulisiweyo ujonge ngokukodwa i-luxe kwi-velvet material luxe kwiindonga nakwikhaphethi apha kwigumbi lokuhlala langoku eliyilwe nguArent & Pyke.
IBJÖRN WALLANDER 8Ngama-20Uthuli Rose
Ipinki ihlala inxulunyaniswa nentwasahlobo nehlobo, kodwa ngokuqinisekileyo inendawo kwindawo yangaphakathi yokuwa. Qaphela emthunzini wothuli oluphakame kumakhethini nakwikhaphethi kwesi sithuba senziwe ngu UJanie Molster . Zombini zithulisiwe kwaye zinomdla ngaxeshanye.
UNicole Franzen 9Ngama-20Beige
Iithoni zeCaramel ziziva zipholile eludongeni lokulala. Yongeza kwabamhlophe kunye neblues ukuze uphilise isithuba kwaye ugcine ukuba ungaziva monochromatic.
UTessa Neustadt 10Ngama-20Apho Grey
U-Emily Henderson uyile le ofisi yasekhaya ejikeleze idesika eluhlaza yemabhile eluhlaza, egxininiswa ziimpawu eziluhlaza kunye nokukhanya. Isitulo sedesika engwevu engwevu kunye nendawo yombala wepeyile zilungele ukuwa.
U-Anson Smart Shumi elinanyeNgama-20URuby Bomvu
Ukusuka kumda o-orenji oqaqambileyo ukuya kwiziko elibomvu le-ruby, le bhodi yebhodi iphambili kwi-Arent & Pyke eyenzelwe igumbi lokulala iye yabhalwa kuyo yonke indawo. Umbala opinki kunye nebhedi emhlophe kunye neendonga ezingwevu zesileyiti ziqinisekisa ukuba alikho ngaphezulu kwexesha.
Isitudiyo DB 12Ngama-20Isityalo seqanda
Eyilwe yi-Studio DB, olu phononongo lolwanamhlanje kunye noludala, luyamema kwaye lunesibindi. Iindonga ezibotshwe nge-eggplant kunye nendawo yomlilo emnyama yemarble yenza imeko esondeleyo kunye nokukhanya, itafile enomboniso, kunye ne-chrome kunye nosihlalo wesikhumba bazisa uyilo olucekeceke ngelixa ubugcisa be-cotton-esque art, imithwalo yomgangatho obomvu yongeza imeko yokuthuthuzela nokudlala .
Uyilo lukaRegan Baker 13Ngama-20Ubunzulu obuhlaza
Isitulo esinzulu esiluhlaza esidityaniswe nesitulo sekhofi somthi okhanyayo kunye nepiyano sisinika ukuwa konke ukuziva. Bona ngaphezulu kwale khaya losapho lwe-eclectic e Uyilo lukaRegan Baker .
Chango & Co. 14Ngama-20Ipipi Apple ebomvu
Izitulo ezibomvu zeapile zeapile zongeza indawo efanelekileyo yokuqina kwigumbi lokutyela yiChango & Co Nangona umbala obomvu unokuba ngumbala owoyikisayo, kumnandi xa uzama ngawo ngeedosi ezincinci. Kulo mthunzi, kuncinci kakhulu ukudlala kwaye kuyonwabile kunokuba kuyothusa.
U-Anson Smart Shumi elinantlanuNgama-20Luhlaza lwasebukhosini
Ngubani othi imibala epholileyo ayinakusebenzela ukuwa? Kweli gumbi lokuhlala langoku lenzelwe nguArent & Pyke, ubungakanani obukhulu bobugcisa obuhlaza okwesibhakabhaka buqinisa imibala engathathi hlangothi kuyo yonke, njengosofa ohlaza-oluhlaza ocacileyo, obeka ithoni yokuwa.
Chango & Co 16Ngama-20I-Persimmon
Isibane se-porcelain kweli gumbi lokulala liyi-monochrome eyilelwe yiChango & Co ihambisa umbala omnandi ngaphandle kokungqubana nokungabikho kwesikimu esimhlophe. I-Persimmon ngumthunzi ogqibeleleyo weorenji xa ufuna umbala omncinci ongagcwelanga kakhulu.
Ixesha lesitalato-Porter 17Ngama-20Itshokholethi
Ukulinganisa umbala omnyama omnyama ngekhilimu kunye ne-orange accents. Ifudumeza igumbi kwaye yongeza ngakumbi kwiithoni zokuwa.
Uyilo oluqhelekileyo 18Ngama-20Inavy Blue
Igumbi leendaba laselwandle eliluhlaza ukusuka Uyilo oluqhelekileyo iziva idrama okwangoku, kwangaxeshanye, isondele. Iinkuni ezifudumeleyo kunye nemilo eqaqambileyo yokuphosa kunye nekhaphethi enemibala zizisa ubunzulu kunye nokufudumala kumbala opholileyo.
UPaul Raeside 19Ngama-20ITerracotta
I-Terracotta ayipheleli ekuvunyweni kokuwa, ikwahle kwaye inobunkunkqele. Ukophula iindonga, yongeza ubugcisa obungaphezulu kobukhulu.
USara uTramp Amashumi amabiniNgama-20Iintsimbi
Amagqabantshintshi obhedu kunye negolide ongezela ukukhanya kwendlela egumbini lokuhlala eyilelwe nguJess Bunge kaEmily Henderson Design, kanye ngexesha lokonwaba kunye nokuzonwabisa. Itafile esecaleni yemarble efudumeleyo yongeza ixesha lomhlaba elithile kumxube.
OkulandelayoEzi ntlobo zemibala zili-15 zilawula ngo-2018 Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiUHadley Mendelsohn Umhleli oMkhulu UHadley Mendelsohn ngumhleli ophakamileyo weNdlu, kwaye xa engaxakekanga ethathela ingqalelo kuzo zonke izinto ezinxulumene nokuhonjiswa, unokumfumana ethengisa iivenkile zokuvuna, efunda, okanye ekhubeka kuba mhlawumbi waphulukana neiglasi zakhe kwakhona.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
Inqwelo yotywala enamavili
Umkhosi wamanzi oluhlaza sherwin williams
ibhola yehla ngokuya ngo-2019
Izipho ze-valentines zomfazi
Indawo yokuhlala eyi-1000 sq